आत्मसमर्पण गर्न आएका तालिबानलाई युद्धमा फर्काउने अमेरिकाको गति कस्तो छ? - Nepal Readers
आत्मसमर्पण गर्न आएका तालिबानलाई युद्धमा फर्काउने अमेरिकाको गति कस्तो छ?
by र्‌यान ग्रीम
के तपाईलाई थाहा छ? अफगानिस्तानमा अमेरिकी आक्रमण भए लगत्तै, तालिबानले आत्मसमर्पण गर्न चाहेको थियो?
अफगानिस्तानमा सदियौं देखि, जब कुनै प्रतिद्वन्द्वी समूह सत्तामा आँउथ्यो, पराजित समूह अर्को कम शक्तिशाली, या अन्य कुनै शक्तिविहीन समूहसँग आत्मसमर्पण गर्दै एकिकृत भएर नयाँ शक्ति निर्माण गर्दथ्यो। जसरी हामी हाम्रा छिमेकीहरुसँग साथै बस्नका लागि गर्छौं। यो कुनै फुटबल खेल जस्तो होइन, खेल सकिएपछि पराजित समूहले शहर छाडेर अन्यत्र लागे हुन्छ। हामीलाई सम्झन मुस्किल हुनसक्छ, अमेरिकाले “सिविल वार” पछि आफ्नो भूमिमा कुनै दीर्घकालीन युद्ध गरेको छैन।
जब तालिबान आत्मसमर्पण गर्न आए, त्यसबेला अमेरिकाले तिनीहरुको प्रस्ताव स्वीकार गरेन। यो कुरा अफगानिस्तान युद्धकाबारे खोजमूलक “No Good Men Among the Living.”, पुस्तकमा आनन्द गोपालले लेखेका छन्।
बुश प्रशासनका लागि पूर्ण विनाश गर्दा नै फाइदा हुन्थ्यो। तिनीहरु धेरै भन्दा धेरै आतङ्कवादी फेला परुन् भन्ने चाहन्थे। समस्या यो थियो कि पाकिस्तानमा गएर वा पुनः नागरिक जीवनमा मिसिएर तालिबानले लडाई रोकिसकेको थियो। अल कायदा पक्षका सदस्यहरुलाई भने औंलामा गन्न सकिने अवस्था बनिसकेको थियो।
यदि आतङ्कवादीहरु नै छैनन् भने तपाईंले कुन र कसरी आतङ्कवादीहरु मार्ने?
तर सजिलै छ: कुरा के भने अमेरिकीसँगै काम गरिरहेका अफगानहरुले आफ्ना सैन्य प्रायोजकहरुको अवस्था बुझेर तिनीहरुले आतङ्कवादीहरुबारे बढाइचढाइ गरे। अमेरिकीहरुले सूचना दिनेलाई नगद दिने भनेपछि तालीवान लडाकूको हत्या वा गिरफ्तारी बढ्यो। एक्कासी चारैतिर तालिबान देखाइन थालिए। हिंसाले उग्ररुप लिन थाल्यो।
ढोका फूटाएर पस्दा पनि प्रश्न गर्न पाइदैनथ्यो। त्यस घरको मान्छेका अघि अति भाग्यशाली युद्धसरदार उभिरहेको हुन्थ्यो र उसका सम्पत्ति उठाएर लान्थ्यो। “हामी पुन राष्ट्रनिर्माण गरिरहेका छैनौ,” राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत सोमवार राती घोषणा गरे। ठीक हो, हामी पनि त यस्तो कहिल्यै थिएनौ यदि दुबइको अर्थबजारमा नगद नलुटिएका र गगनचुम्वी भवनहरु नबनाइएका भए।
आत्मसमर्पणको प्रयाशका केही वर्षपछि पनि, तालीवानीहरुका आत्मसमर्पणका प्रयाशहरुलाई बार-बार अस्वीकार गरिए। तब पुराना तालिबानले फेरि बन्दुक उठाउन बाध्य भए। जुनबेला उनीहरु सत्तामा थिए, त्यसवेला जनताहरु सत्ताच्यूत भएको हेर्न चाहन्थे। अमेरिकाले नै उनीहरुलाई पुन लोकप्रिय हुने चाँजोपाँजो मिलाइदिए।
गोपालको यो पुस्तक युद्ध कसरी संचालन भइरहेको छ भन्ने यथार्थ विवरण हो। यो उपन्यास जस्तो छ। यो तीन जना अफगानीहरुको वास्तविक कर्तुतनामा हो, जो युद्धकै कारण ऐय्यासी जीवन जिइरहेका छन्। ती हुन्- एक अमेरिकी आक्रमणका समर्थक सरदार, एक तालिबान कमाण्डर र एक गृहिणी। म अनुरोध गर्छु- यो पुस्तक ट्रम्पले पढुन्। यस पुस्तकले राष्ट्रपतिसँग भएको “नयाँ र बकाइदाको रणनीति”बाट गरिने युद्ध विरुद्ध गम्भीर चेतावनी दिन्छ।